Goobaha Kubadda Cagta ee Indianka Online - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Casriyeynta ee Indianka Online
Loading ... Sharciyada khuseeya khamaarka ee Hindiya laguma qeexayo. Noocyada ugu badan ee khamaarka waddanku xaqiiqda waa la mamnuucay sida sharciga qamaarka ee 1867 wuxuu mamnuucayaa shaqada ama booqashada casinos iyo ganaaxyo yar yar ama xabsi.
Illaa iyo hadda, waddanku ma laha sharci cad oo ku saabsan khamaarka. Sharci ahaan ku ciyaaraan Hindiya waxay ku jiri karaan oo keliya sedexda magaalo: Sikkim, Goa iyo Daman. Goa waxaa jira 7 casiin ah oo dhul-ku-saleysan oo badanaa lagu rakibay mishiinnada. Kulamada guddiga waxaa ku jira shanta casino ee kuyaala xeebaha Mandogi River iyo casinos dhulka ku yaalla ee Sikkim.
Dhawaan dhowaan, bishii August 2016, Macau wuxuu furay khadka ugu casrisan adduunka Wynn Palace, oo kharashka dhismaha uu ahaa mid rikoodh ah taariikhda dhismaha casinos waxaana lagu qiyaasey bilyan doollar dollar. Waxaa jira bakhtiyaanasiib, laakiin dad badan oo kale ayaa sidoo kale lagu mamnuucay shan gobol oo Hindi ah. Isboortiga ciyaaraha fudud ee boodhka, kuwaas oo loo tixgeliyey ciyaar xirfadeed Maxkamadda Sare ee 1996.
Liiska ugu sareeya ee 10 Hindi Casino Online
Khamaarka online ee India
Tan iyo markii dawladdu aysan ku siinin liisanka si ay uga shaqeeyaan goobaha khamaarka internetka ee Hindiya, waddanku sidoo kale sharciyada otsutstvuety oo si khaas ah loogu talagalay khamaarka internetka. Maadaama khamaarka dhulku uu yahay mid aad u badan oo Hindiya ah, qaar badan ayaa rumaysan in tani ay sidoo kale khuseyso khamaarka internetka. Laakiin ma jiro siyaasad adag oo ka jirta aaggan, taas oo ka hortagi lahayd khamaarka Hindi ee ciyaaraya internetka, sidaa daraadeed waxay sameeyaan waqtiga oo dhan.
Waqtigan xaadirka ah, Sikkim waa gobolka kaliya ee Hindiya, oo maamusho suuq lagula socon karo khamaarka online, iyo xagaaga 2015 wuxuu furay bogga ugu horreeya ee isboortiska ee Isboortiga Hindiya. Sikkim sidoo kale waa hogaamiye iyo Sikkim Super Lotto. Laga aasaasay 2002, bakhtiyaa-nasiibka ayaa weli ah goobaha khamaarka ee sharci-darrada ah ee dalka oo dhan.
Inkasta oo suurtagal ahaan ay suuragal tahay in la siidaayo noocyo kala duwan oo khamaaris iyo isboorti oo kala duwan sida waafaqsan sharciga khamaarka internetka ee Sikkim (2008) iyo xeerarka cayaaraha ee Sikkim (2009), ma jiro wali hawlwadeenada weli lama siinin liisan buuxa. Sidaa daraadeed, ciyaartoyda Hindiya ee ku raaxeysta ciyaarta poker iyo bingo, ciyaaraha isboortiga iyo casinos-kooda ayaa ku qasban in ay isticmaalaan goobaha khamaarka internetka ee dibedda ah.
Isla mar ahaantaana, khamaarayaasha da 'yarta ah ayaa aad u tarjumay furitaanka xisaabaadka iyadoo la eegayo xaqiiqda ah in dhaqdhaqaaqa tooska ah ee dhaqaale ee u dhexeeya dadka reer Hindiya iyo goobaha khamaarka ee khamaarka ay mamnuucayaan khamaarka online ee Hindiya. Bishii Maajo, 2011, Hindiya waxay ogolaatay sharci federaal ah oo ku saabsan tiknoolajiyada macluumaadka, oo ay ku jiraan qodobbo khaas ah oo xadidaya khamaarka internetka waxayna ku xiran yihiin bixiyayaasha internetka ee mas'uulka ka ah xannibaadda boggaga ciyaaraha isboortiga ee ciyaaraha isboortiga.
Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka soo jeeda Hindiya
Waxaad eegtaa liiska goobaha casino ee aqbalaya ciyaartoyda ka yimaada India, oo bixiya cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Waxaad sidoo kale akhrin kartaa boggayaga internetka ee khadka casriga ah, si aad u ogaatid dhiirigelinta internetka ugu wanaagsan, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoyda Hindiya.
0.1 Liiska ugu sareeya ee 10 Hindi Casino Online
2.1 Khamaarka online ee India
2.2 Boggaga internetka ee casino ayaa aqbalaya ciyaartoy ka soo jeeda Hindiya